Lenovo New Glass C220, nkwa ọhụrụ iji gbasaa eziokwu | Akụkọ akụrụngwa
Lenovo New Glass C220, nkwa ohuru iji gbasaa eziokwu
Juan Luis Arboledas | | Ihe omume, Technology
Ọ bụ ezie na ọ ga-adị ka ọ bụ ugbu a CES 2018 ọ nweghị ike iju anyị anya na ihe ọ bụla ọzọ, dịka ọ na-adịkarị n'ụdị ikpe a, anyị hiere ụzọ nke ọma na, n'otu ntabi anya, anyị hụrụ onwe anyị Lenovo na ngosi, na-enweghị tupu mara ebe ọ bụ na ọbụna na ogbako na ụlọ ọrụ nyere ụnyaahụ kwuru ihe ọ bụla, ụfọdụ ọhụụ augmented nke bụ eziokwu.
Igwe ndị ọhụrụ a na-adọrọ mmasị, dị ka anyị kwurula, bụ nzọ ọhụrụ iji weta ndị ọrụ niile na teknụzụ nke anyị masịrị nke ukwuu mana na nke a emeela ụfọdụ isi ọwụwa ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka eziokwu dịwanye elu. Inye 'ihe dị iche'Lenovo kpebisikwara ike inye iko ya ọgụgụ isi iji bulie arụmọrụ ya niile.
Tupu ị banyekwuo nkọwa zuru ezu, na ntọhapụ mgbasa ozi nke ngalaba nkwukọrịta Lenovo nyere, a mara ọkwa na iko ndị ọhụrụ a, aha ya bụ nke Glass ọhụrụ C220 ha adịlarịrị iru rute ahịa. N'oge a, ekwesịrị ịkọwapụta na, ọ dị nwute, ndị ezubere maka ndị ọkachamara, agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ya mere, maka oge a, a na-ewepụ ya na ndị ahịa ọ bụla nwere ike inweta ha otu a.
1 Lenovo New Glass C220, a modular na-abawanye eziokwu iko na ịrịba nwere
2 N'oge 2018 Lenovo ga-amalite mmemme pilot nke ụlọ ọrụ ole na ole na China ga-arụ ọrụ na iko ndị a
Lenovo New Glass C220, a modular na-abawanye eziokwu iko na ịrịba nwere
N’adịghị ka nhọrọ ndị ọzọ anyị nwere ike ịmụ maka ọtụtụ ọnwa, ntinye Lenovo na New Glass C220 nwere iko ndị e ji mara ya gbakọtara n'akụkụ abụọ. N'otu aka anyị nwere iko ndị a na-ahụkarị maka iko, nke ịdị arọ ya dị gram 60, dịka ọ dị n'ọnọdụ ndị ọzọ, ga-arụ ọrụ dị ka ihe ngosi dị adị. Nke abuo, enwere ihe a na-akpọ nhazi nke ga-ahụ maka ịgwọ ozi niile sitere na ihe mmetụta na igosipụta nsonaazụ.
Na-elekwasị anya na nhazi ahụ, dị ka ekpughere, ọ dabere na gam akporo ma nwee usoro ọgụgụ isi nke aka ya, ọkachasị ọ na-eji sọftụwia ngwanrọ Lenovo NDB AH Cloudgwé ojii 2.0 nke, dị ka ihe ncheta, na-etinye usoro nke eziokwu dịwanye elu, ọgụgụ isi na Big Data. Akụkụ na-adọrọ mmasị bụ na, n'ihi na New Glass C220 dị mma, dịka anyị kwurula, Lenovo nwere olile anya na ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ike ịme ngalaba nhazi nke ha iji gbasaa ikike niile nke ngwaahịa a.
N'oge a, anyị enweghị ike ịkọwa nke ahụ, dị ka a pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ, ndị na-emepụta Lenovo na ndị injinia nyere iko a dị oke mma. usoro nhazi usoro ọkpụkpụ. O doro anya na dịka nkwupụta mgbasa ozi, e mepụtara usoro a na-echebara nke ahụ echiche iko nwere na-arụ ọrụ na-eme mkpọtụ gburugburu.
N'oge 2018 Lenovo ga-amalite mmemme pilot nke ụlọ ọrụ ole na ole na China ga-arụ ọrụ na iko ndị a
Na nwute, ewezuga ihe niile metụtara ya, enwere data ole na ole ndị Lenovo nyere maka ngwaahịa a belụsọ, dịka ọmụmaatụ, usoro ojiji ya, ihe nwere ike ịba uru ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-ezube ijide otu nke njirimara ndị a. Banyere ọnọdụ eji, o doro anya na iko, na oge mbụ eji ha, ha ga-ejikọrịrị ama anyị. Ozugbo e guzobere njikọ a, dị mkpa maka nhazi ya ziri ezi, ọ gaghị adị mkpa ọzọ ebe ọ bụ na iko ga-arụ ọrụ site na WiFi.
Onwe m, ekwesịrị m ikweta na nke a bụ ngwaahịa na-adọrọ mmasị maka ikike na ịrụ ọrụ, ihe dị omimi banyere okwu a niile bụ na, n'agbanyeghị nnukwu ikike ya, site Lenovo achọghị ịnye ya ọhaneze ọ kwesịrị. N'ime ihe ndị nwere ike ịkpata nke a, kpọọ dịka ọmụmaatụ na ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị ha ga-enweta bụ amaghi ọ bụ ezie na, dịka ụfọdụ okwu ndị ọzọ si kwuo, ọ dị ka a ga-eme ule pilot n'ime afọ a 2018 na ụlọ ọrụ ole na ole na China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Lenovo New Glass C220, nkwa ohuru iji gbasaa eziokwu
Sony rere ihe karịrị 5,9 nde PS4 consoles na ekeresimesi a
AGBANYA, elekere modular na-ere ahịa mgbe ọtụtụ ọrụ gachara